Himalaya Dainik » यी ६ नेपाली नायिका जसले किन खाैरिए कपाल ?
यी ६ नेपाली नायिका जसले किन खाैरिए कपाल ?
नेपालि चलचित्रकि चर्चित अभिनेत्री केकी अधिकारीले कपाल मुन्डन गरेको प्रसंग यतिबेला फिल्मबृत्तमा चर्चामा छ । उनले कपाल मुन्डन गर्नुको कारणबारे फ्यानहरूबीच पनि उत्तिकै कौतुहलता रहेको पनि बुझिन्छ ।
कपाल महिलाहरूको सुन्दरतासँग जोडिन्छ । आफ्नो कपाललाई लिएर उनीहरू निकै सवेदनशील रहेकाे पनि हुन्छन् । महिलाको ३२ लक्षणको परम्परागत मापनमा लामो तथा कालो कपाल पनि पर्छ ।
अभिनेत्रीहरू खासै कपाल मुन्डन गर्दैनन् । फेरि ‘वीग’ पाइने हुनाले खौरिएरै देखाउनुपर्ने जरुरी पनि ठानिदैन । तर, रियालिटीको जमानामा नक्कली काम गरेर हुँदैन भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । केकीको मुन्डन पछाडि यिनै कारण लुकेको बुझ्न सकिन्छ ।
आज हामी कपाल मुन्डन गर्ने केही नायिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौं । जसले जीवन्त अभिनयका लागि कपाल खौरिए भने केहीले रहरले पनि ।
नायिका गौरी मल्लले पनि जापानमा रहँदा कपाल मुन्डन गरेकी थिइन् । त्यवेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कपाल मुन्डन गरेको तस्विर सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
उनले एक अन्तरवार्ताको क्रममा भनेकी थिइन्, ‘म युवावस्थामा हुँदा इन्डियामा एकजना मोडल थिइन् पर्सिस खम्बाटा । उनले कपाल मुन्डन गरेको मलाई साह्रै मन परेको थियो । मलाई पनि पर्सिसको जस्तै कपाल मुन्डन गर्न मन थियो । तर, घरबाट स्वीकृति नपाएपछि काटिन । जापा रहँदा मैले सोंचे, यहाँ त मलाई रोक्ने कोइ छैन ।
नम्रता श्रेष्ठले फिल्म ‘जायरा’ छायाङ्कनको क्रममा कपाल काटेकी थिइन् । उनले कपाललाई ‘जिरो’ बनाएकी थिइन् ।
नम्रताले एक्सन मुडमा केही युवाहरूसँगको तस्विर पोष्ट गरेकी थिइन्, क्याप्सनमा लेखिएको थियो, ‘जायरा टिम’ । यो तस्विरमा उनको लुकलाई लिएर धेरैले चासो देखाएका थिए ।
नेपालका चर्चित ५ इन्स्टाग्राम क्विन, कसको फ्लोवर्स कती ?